Akaundi-Yakavakirwa Kutengesa Strategic ndeyeMangwana, uye Groove iri Pano Izvo | Martech Zone
Chitatu, Kukadzi 7, 2018 Chitatu, Kukadzi 7, 2018 Chris Rothstein
Kana zvasvika kune SaaS software yekutengesa, kunongedza vanhu hakusi muenzaniso weunyanzvi. Shure kwezvose, avhareji yevanhu 5.4 vanobatanidzwa mune rimwe bhizinesi rekutengesa sarudzo. Tichifunga kuti boka-based vetting ndizvo zvakajairwa, account-based kutengesa (ABS) inobudirira pane kunongedza zvakanangwa.
Iyo account-based nzira yekutengesa, zvisinei, inogona kutora nguva. Kuteedzera kwakadzika metric uye nguva dzakatarwa kune akawanda zvibodzwa, pamwe nekubatana pane iyo ruzivo kune ese emukati zvikwata, zvinonzwa kunge zvisingaite kunze kwekunge iwe uchikwanisa kuita komputa-senge sangano. Mhinduro yacho? Sales kushandisa michina.
Pakati pemazuva angu ndichishanda mukutengesa kuGoogle, ndakazviwana ndirikuda mubatsiri akangwara aigona kuteedzera nguva dzangu dzese, mapatani uye zviyeuchidzo pasina kuti ndigozviraira. Pakupedzisira, ini ndaida chimwe chinhu chinondibatsira kuti ndiwane groove yangu kuitira kuti ndigone kugara ndakabatikana ndichishanda chikamu chevanhu chekutengesa. Ndipo apo Groove, iyo yekutengesa inogonesa chikuva, yakazvarwa.
Izvo iwe zvaunogona kuita neGroove
Mukugadzira maitiro ekutengesa akareruka uye akangwara, Groove inoputsa kugona kwayo munzvimbo nhatu. Nekugadzira iyo isina musoro basa revafundisi padanho rega parwendo, Groove iri kutora zvakare data rakakosha kuti ikubatsire kutengesa zvine hungwaru mune ramangwana, kunyanya kune avo vanotevera maABS mazano.
Sync: Nzwisisa zvese zvinoitika mune yako yekutengesa ecosystem
Iyo yekutenderera inotenderera yakareba neABS, uye izvo zvinoreva kuti mamwe metric ekuteedzera kwenguva yakareba yenguva. Kuti uchengete ziso reshiri richiona maitiro ese, kuteedzera uye kuongorora metriki zvakakwana uye nekukosha kwakakosha.
Groove inotora metrics yesangano rese, kubva kuemail ese anotumirwa nekugashirwa kufona yega yega yakadzoserwa ikadzoka. Kutora iyi data kunotendera Groove kuona kuti ndedzipi nzira dzekushambadzira dzinoshanda zvakanyanya kuti uwane tarisiro yako.
Pachivanhu, vezvekutengesa vanofanirwa kuita sarudzo yekuziva kuunganidza iyo data uye kushandisa nguva vachiita pfungwa yayo kuti vawane mazano uye nguva dzakatarwa dzinoshanda zvakanyanya. Maonero aanogona kuendesa akakosha, asi iyo nguva yekudyara haina kukosha. Groove inotora iyo nguva kutambisa kunze kwemubvunzo uye inoita kuti yekutengesa nyanzvi kupenya neakakwira-danho rezano painobata granular ongororo.
Kuyerera: Dhiraivha inoenderana maitiro
Kunyanya kukoshesa kwakakosha kana zvasvika kuABS nekuda kweiyo yakakwira vhoriyamu yenguva uye zviwanikwa zvainoda. Vatengesi vezvekutengesa vanofanirwa kukwanisa kusarudza kuti ndeapi macampaign nemasangano avanoda kukoshesa mukufambisa kwavo, asi nemasangano mazhinji anotarisirwa panguva imwe chete, zviri nyore kukurirwa neese mafambiro ekuronga nguva.
Groove inorwisa iyo inorwira kuburikidza nekwaniso yayo yekugadzirisa zvinodzokororwa maitiro. Izvo maficha ayo anotendera iwe kuti ugadzire otomatiki zviyeuchidzo mitemo yekuita kusangana neako tarisiro. Semuenzaniso, iwe unogona kutaurira iyo sisitimu, "Kune ese account-based lead, ndirangarire kuti ndisvike mazuva mashanu mushure mekunge vapinda muhurongwa, uyezve wovawedzera paLinkedIn mazuva mashanu mushure meizvozvo," kudzamara iwe uine hwese hwakazara software. Panzvimbo pekutora nguva yekuzadza zviyeuchidzo zvako zve iPhone kana yako Google Calendar, Groove arikushandisa iyo mirau yako kune yega yega tungamira.
Purogiramu: Svikira kugadzirwa kwakachena
Kuwanda kwevanhu vanobatanidzwa mukutengesa, ndidzo pfungwa zhinji dzaunofanirwa kugutsa. Naizvozvo, zvakatonyanya kukosha kuva nenguva yemeso nemunhu wega wega anobatanidzwa kuitira kuti ugone kushambadzira meseji yako kune wega kufarira. Pasina akangwara kuronga chishandiso, ndiyo yakawanda nguva uye email inodikanwa.
Kugadzirwa kweGroove kunogadzirisa zvakanangana nekuronga marwadzo poindi. Vatengi vanokwanisa kuona yako khalendari uye kuwanikwa kune nguva yekuverenga zvakananga. Izvi zvinodimbura iyo email kumashure-uye-mberi kuti ukurukure sarudzo dzenguva, kunyanya kana iwe uchinangisa vanhu vazhinji pasangano rimwe chete vari kuita mukutengesa.
Kugona kwekuronga kweGroove zvakare kunotendera reps kuronga email kuti itumirwe panguva dzakanyanya kunaka uye uone kana maemail akavhurwa kune zano rekuita. Strategies dzinogona ipapo neruzivo kuchinjika zvichibva pane zviri kushanda uye chii chisiri, zvichibvumira reps kuti iwane yakakwana chiyero uyezve kufamba kuburikidza nebasa ravo nekukurumidza, vhara zvimwe kutengesa uye uwane mari yakawanda.
Ko Groove yakasarudzika sei?
Groove ndiyo yega-mu-imwe yekutengesa inogonesa mhinduro pamusika inoenderana neyako yekutengesa timu. Nepo mhinduro zhinji dzichishanda kune imwe chete nhanho yetimu yako, Groove tailors kune chero chinzvimbo - kucheka kudiwa kwekushandisa pazvishandiso zvakasiyana siyana uye vashandi veboardboard kune vatsva pavanosimudzirwa.
Kuburitsa sangano rako kuGroove maitiro akareruka asingatore anopfuura maawa mashoma. Kuburikidza ne-in-deep kudzidzisa musangano, timu yedu inogona kukuratidza maitiro ekugadzirisa chirongwa kune zvaunoda. Hazvina mhosva kana timu yako yakaumbwa nevane gumi kana chiuru vevashandi vekutengesa, kukwikwidza chiitiko chakatsetseka.
Sezvo vanhu vazhinji vanotora chikamu muSawaS kutenga sarudzo, maitiro ekutengesa anoda kuve akareruka kuitira vese mutengesi nemutengi. Groove ine zviono zvayo zvakaiswa pane yakangwara account-yakavakirwa kutengesa nyika uye inoda kuzviita chaicho.
Tags: absaccount based kutengesaGrooveKugonesa Kugonesakutengesa rwendopombi yekutengesasalesforce
Chris Rothstein ndiye CEO uye co-muvambi we Groove.co, yekutengesa yekudyidzana chikuva. Asati aenda kuGroove.co, Chris aivaka, akayera uye akakurisa zvikwata zvekutengesa kuGoogle. Iye zvino anobatsira kuunza tekinoroji yazvino kune nyika yekutengesa saka munhu wese kubva kune vekutengesa ops kune vatengesi vatengesi vanogona kushandisa yakawanda nguva kupa kukosha kune vatengi vavo nemakambani avo.